Iwo mashanu Ekurwisa Akaitwa PaEcommerce Sites | Martech Zone
Aya mashanu Ekurwiswa Akagadzirwa PaEcommerce Sites
Chitatu, July 1, 2020 Chitatu, July 1, 2020 Douglas Karr
Imwe yeanonyanya kushamisa manhamba maererano neCOVID-19 uye kukiyiwa ndiko kuwedzera kunoshamisa mue-commerce zviitiko:
COVID-19 yakawedzera zvakanyanya kukura kwe e-commerce, sekureva kweshumo reAdobe rakaburitswa nhasi. Yese online yekushandisa muna Chivabvu yakarova $ 82.5 bhiriyoni, kukwira 77% gore-pamusoro-gore.
John Koetsier, COVID-19 Akawedzera E-Commerce Kukura '4 Kune 6 Makore'
Iko hakuna indasitiri isina kubatika… misangano yakaenda chaiyo, zvikoro zvakaendeswa kune yekudzidzira manejimendi uye online, zvitoro zvakatamisirwa mukutora uye kuendesa, maresitorendi akawedzera kutora, uye kunyange makambani eB2B akashandura ruzivo rwavo rwekutenga kuti vape tarisiro nematurusi. kuzvisarudzira kushandira kwavo online.
E-commerce Kukura uye Chengetedzo Njodzi
Sezvo nekuchengetwa kwevanhu vazhinji, matsotsi anotevera mari… uye kune mari yakawanda mue-commerce kubiridzira. Maererano ne Signal Sayenzi, cyber mhosva zvichaguma zvinodarika madhora gumi nemaviri emadhora mukurasikirwa muna 2020. Sezvo makambani matsva achienda kune e-commerce, zvakakosha kuti ivo vanosanganisira kuchengetedzeka mukuchinja kwavo… zvisati zvavatorera bhizinesi ravo.
Iyo yepamusoro 5 E-commerce Inorwisa
Kubvisa Akaundi (ATO) - inozivikanwawo se nhoroondo yekutora kubiridzira, ATO inoitisa ingangoita 29.8% yeese ekunyepera kurasikirwa. ATO iri kuwana zvinyorwa zvevashandisi zvekutora maakaundi epamhepo. Izvi zvinovagonesa kuwana data rekadhi rechikwereti kana kutenga zvisiri pamutemo uchishandisa account yemushandisi. Kubiridzira kweATO kunogona kushandisa zvinyorwa zvoga zvinopinda zvitupa muzhinji kana kuve munhu kuzvinyora nekuwana iyo account. Mirairo inogona kuendeswa kumatare anotariswa ekuendesa uko zvigadzirwa zvinotorwa uye zvinoshandiswa kana kutengeswa nemari. Username uye password mapaundi anowanzo kutengeswa muhuwandu kana kutengeswa paRima Web misika. Nekuti vanhu vazhinji vanoshandisa zvakafanana login uye password, zvinyorwa zvinoshandiswa kuyedza zita rekushandisa uye mapassword kune mamwe masayiti.
Chatbot Imposter - bots ari kuve chinhu chakakomba chee-e-commerce nzvimbo dzevashandisi kusangana nemakambani, kufamba kuburikidza nehungwaru mhinduro, uye kutaura zvakananga kune vamiririri. Nekuda kwekuzivikanwa kwavo, ivowo vari tarisiro uye vane basa re24.1% yezvose zviitwa zvekunyepedzera. Vashandisi havagone kusiyanisa mutsauko pakati peti chatbot chaiyo kana yakashata iyo inogona kuvhurwa papeji. Uchishandisa adware kana webhu jekiseni majekiseni vanobiridzira vanogona kuratidza yekunyepedzera pop-up chatbot uye vobva vaburitsa yakawandisa ruzivo kubva kumushandisi sezvavanogona.
Backdoor Files - Matsotsi eCyber ​​anoisa malware pane yako e-commerce saiti kuburikidza nenzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzekupinda, senge echinyakare plug-ins kana minda yekuisa. Kana vangopinda, vanokwanisa kuwana data rese rekambani yako, kusanganisira ruzivo rwevatengi rwunozivikanwa (PII). Iyo data inogona kutengeswa kana kushandiswa kuwana mukana kune maakaunzi emushandisi. 6.4% yekurwisa kwese kuri backdoor faira kurwisa.
SQL Jekiseni - online mafomu, URL querystrings, kana kunyange chatbots dzinopa dhata dzekupinda dhata dzingave dzisina kuomeswa uye dzinogona kupa gedhi revabirimi kubvunza kumashure-kumagumo dhatabhesi. Iyo mibvunzo inogona kushandiswa kutora ruzivo rwemunhu kubva kudhatabhesi kunochengetwa ruzivo rwesaiti. 8.2% yekurwisa kwese kunoitwa nemajekiseni eSQL.
Muchinjikwa-Saiti Kukanda (XSS) - Kurwiswa kweXSS kunogonesa varwisi kuti vapinze zvinyorwa kuburikidza neshanduro yemushandisi mumapeji ewebhu anoonekwa nevamwe vashandisi. Izvi zvinogonesa vabiridzi kuti vapfuure mawaniro ekuwana uye vawane ruzivo rwevanhu ruzivo (PII).
Heano akakura infographic kubva kuSignal Sayenzi pane Rising Tide reE-commerce Kubiridzira - kusanganisira nzira, mapatani, uye matanho ekudzivirira ayo kambani yako inofanira kuziva uye kubatanidza nechero e-commerce zano.
Tags: account munyengeriaccount kutoranhoroondo yekutora kurwisanhoroondo yekutora kubiridziraatokumashuremuchinjiko -saiti scriptcyber mhosvae-zvokutengeseranae-commerce kurwisa manhambae-commerce kubiridzira kudzivirirae-commerce nzira dzekubiridzirae-commerce kubiridzira maitiroecommerce kubiridziraecommerce chengetedzokubiridzira pamhepomutengesi cyber chengetedzochibatisosayenzi imwe chetesql jekisenikurwisa kwepamusoro nenyikakurwiswa kwewebhu
Kunzwisisa Kero Kuchenesa, Kumisikidza, uye Kuendesa Verification APIs
Dudziro uye Chinyorwa Kuwedzeredza Vhidhiyo Kushambadzira Performance